Saxiixyada Fashilmay Xagaagan Gini Wijnaldum Oo Qorshaha Ugu Jirin Kooxda PSG
HomeWararka CiyaarahaSaxiixyada Fashilmay Xagaagan Gini Wijnaldum oo Qorshaha ugu jirin Kooxda PSG
October 31, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka France, Suuqa kala iibsiga 0
Maamulka PSG ayaa isku diyaarinaya badalka xidiga Gini Wijnaldum.
Ciyaaryahankii hore ee khadka dhexe ee Liverpool ayaa xagaagan yimid heshiis xor ah laakiin wuu ku guuldareystay inuu la qabsado kooxda.
Foot Mercato ayaa sheegtay in qaab ciyaareedka Wijnaldum uu walaac ku noqday PSG oo ay haatan qorsheynayaan inay bedelaan.
L’Equipe ayaa ku warameysa in kooxda PSG aysan wax xiiso ah u qabin inay ka caawiyaan Wijnaldum inuu la qabsado kooxda.
Haatan ciyaaryahanka khadka dhexe ee Inter Milan Marcelo Brozovic , oo qandaraaskiisu dhacay June, ayaa PSG ay u diyaarineysaa bedelka ciyaaryahanka reer Holland.
Bishii hore, Wijnaldum ayaa qirtay: “Ma dhihi karo gabi ahaanba waan faraxsanahay. Sababtoo ah xaaladdu maaha mid aan rabay. Laakiin tani waa kubbadda cagta, waana inaan barto sidii aan ula macaamili lahaa.
“Anigu waxaan ahay dagaalyahan, waa inaan ahaado mid wanaagsan oo aan ku dadaalo sidii aan u hagaajin lahaa, wax badan ayaan ciyaaray dhowrkii sano ee la soo dhaafay, waligey xaalad fiican ayaan ku jiray, sidoo kale waxaan soo bandhigay wax aad u fiican,